China kpaliri ígwè waya emepụta na suppliers | Ngwongwo Shoufan
Hot-itinye galvanizing bụ itinye-plating na a kpụ ọkụ n'ọnụ na a wụrụ awụ zinc ngwọta. Mmepụta ọsọ bụ ngwa ngwa, na mkpuchi bụ oké. Okpukpo kacha nta nke mkpuchi zinc nke ahia nyere bu micron 45, ihe kachasi karie 300 microns. Ọ bụ ọchịchịrị na agba, na-erepịakwa ọtụtụ zinc ...
Kpaliri Iron Waya na-agụnye waya ikuku na-ekpo ọkụ na waya na-ekpo ọkụ.
Zinc ntekwasa: 1. Electro galvanized ígwè waya bụ 15-20g / m2. 2. Hot galvanized ígwè waya bụ 30-300g / m2
Hot-itinye galvanizingna-etinye na-etinye na zinc na-ekpo ọkụ ma wụrụ awụ. Mmepụta ọsọ bụ ngwa ngwa, na mkpuchi bụ oké. Okpukpo kacha nta nke mkpuchi zinc nke ahia nyere bu micron 45, ihe kachasi karie 300 microns. Ọ bụ ọchịchịrị na agba, na-erepịakwa ọtụtụ zinc, na-etolite oyi akwa infiltration na isi igwe, ma nwee ezigbo mmebi ahụ. Enwere ike ịnọgide na-ekpo ọkụ ọkụ ruo ọtụtụ iri afọ na gburugburu.
Oge oyi(galvanizing) bụ usoro nke zinc ji nke nta nke nta kpachie ihu igwe ahụ na ịsa ahụ galvanic. Mmepụta ọsọ na-adịghị ngwa, mkpuchi bụ edo, na ọkpụrụkpụ bụ mkpa, na-emekarị naanị 3-15 microns. N'ihe metụtara ikpo ọkụ ọkụ, mmepụta mmepụta nke ikpo ọkụ eletrik dị ala.
Ihe: elu mma ala carbon ígwè waya Q195
atụmatụ: mgbanwe dị mma na ịdị nro
zinc ọnụego: 15g-250g / ㎡
ike ọdụdọ: 30kg-70kg / ㎡
elongation ọnụego: 10% -25%
ibu / eriri igwe: 0.1kg-800kg / eriri igwe
Gakpụrụ ọkọlọtọ: BWG34 – BWG4 nke ahụ bụ 0.20mm – 4.0mm
Ibu nke eriri igwe: na galvanized waya eriri igwe nwere ike izute ahịa 'ina, obere na nnukwu eriri igwe dị.
Nzube: tumadi maka owuwu, ikpa net, brushes, nkwukọrịta akụrụngwa, akụrụngwa ọgwụ na eriri, ihe nzacha, ọkpọkọ nrụgide dị elu, ọrụ aka, na ubi ndị ọzọ
Njirimara & Ngwa: Akwa mkpuchi akwa na akwa nguzogide akwa, na-edozi ya ma na-edozi ya, na-amị amị amị, nke eji eme ihe na ntanetị, na-ejikwa ya na ụlọ ọrụ, ọrụ ugbo na ịzụlite ngwaahịa.
Ngwugwu: 0.3-1000kg dị, n'ime mbukota site ịkwanyere ibe, elu mbukota site hessian ákwà ma ọ bụ naịlọn akpa n'èzí.
Ike ndọta na usoro ngụkọta nke waya waya
Ngalaba obe uzo ozo = m2 * 0.7854 mm2
Waya na-agbasa erughị ala Newton (N) / mpaghara mpaghara mpaghara mm2 = ike MPa
10 # igbo
11 # igbo
13 # igbo
15 # 1
16 # igbo
17 # #igbo
18 # igbo
20 # igbo
21 # igbo
22 # igbo
Enwere ike ịme nha ndị ọzọ dị ka ihe ị chọrọ.
Nke gara aga: Rsdọ eriri waya torsionproof
Osote: Galvanized ígwè eriri
Electric kpaliri Iron Waya
Hot tinye kpaliri Iron Waya
Iron Ntu Waya
Iron Waya eriri igwe
Iron kpara Waya
Rsdọ eriri waya torsionproof
Nwa annealed waya
Cokwanyere ntekwasa waya